Codso ballan ballanta ilmo iska soo rididda ama daryeelka dumarka ee Virginia
Miyaad dirtay dalabkaaga ballanta internetka? Fadlan sii wad Foomamka Macluumaadka Bukaanka adigoo gujinaya halkan.
Ma u baahan tahay dib-u-dhigid ama beddel ballan? Fadlan ku sii wad annaga Dib u dhig jadwalka Foomka Ballanta adigoo gujinaya halkan.
Dooro Daryeelka Haweenka or Daryeelka Ilmo soo rididda ballan Waxaad arki doontaa xulashooyinka aad ku dalban karto ballamo.
*CUSUB* Haddii aad codsanaysid ballanta daryeelka Daryeelka Ilmo iska soo rididda, waxaan ku siin doonaa fursad aad ku samayso a Ballanta Telehealth. Telehealth waxay siisaa fursad ay kulakulanto aqoonyahan bukaan kahor intaanay imaanin ballantaada shaqsi ahaaneed waqtiga oo aad u ogolaato saacado badan oo rogrogmi kara. Ka dib markaad codsato maalin ballanta telehealth-ka waxaad fursad u heli doontaa inaad ku xusho maalin ballantaada qof ahaaneed.
Dhammaan codsiyada ballanta waxaa dib u eegay Baraha Bukaanka.
Waa lagaala soo xiriiri doonaa (iyada oo loo marayo habka aad door biddo) si loo xaqiijiyo waqtiga ballantaada.
Fadlan Ogsoonow: Dhammaan ballamaha waa la codsadaa waxaa xaqiijin doona Aqoonyahan Bukaan si loo xaqiijiyo taariikhda iyo waqtiga ballanta. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, fadlan naga soo wac 703-532-2500.
Mar alla markii aad dhammaysato codsiga ballanta, fadlan Foomka Macluumaadka Bukaanka ku buuxi khadka tooska ah.
Fadlan nambar ka soo qor 0 ilaa 99.
Mudadii Caadiga Ahayd Ee Bukaanka*
Cinwaanka Guriga (waligeen waxba ma soo diri doonno haddii aan nala weydiisan mooyee).*
Cinwaanka Street Cinwaanka Line 2 dareenka AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingCiidamada Qalabka SidaCiidamada Qalabka Sida ee YurubCiidamada Qalabka Sida State ZIP Code
Waa maxay luqadda aad doorbideyso?
Fadlan Sheeg Habka Bixintaada*
Mushahar qaas ah
Waa kuma milkiilaha ceymiska?*
Qaanuunka Taariikhda Dhalashada*
Siyaasadda / Aqoonsiga Xubinta #*
Faa'iidooyinka Bixiyaha / Lambarka Taleefanka Adeegga Macaamiisha (Waxay ku yaalliin kaarka gadaashiisa)*
U isticmaal arimahan inaad ku soo dhejiso nuqul ama sawirka kaarkaaga caymiska (hore iyo gadaal).
Ku rid files halkan ama
Ugu badnaan Cabirka faylka: 2 MB, Max. faylasha: 2.
Ma u baahan doontaa gargaar lacageed?
Dooro maalinta aad doorbideyso ballantaada daryeelka dumarka*
Ballanta cudurka dumarka (codsi 2 maalmood ka hor)*
DOORO MIDHAWEENKA CAAFIMAADKA SANADKA EE IMTIXAANBOOQO XAFIISKAQORSHEYNTA QOYSKAQIIMAYNTA MADAXDARNIMADA / MAAMULKAOTHER
Haddii booqashada cudurada dumarka ee "kale", fadlan sharaxaad ka bixi.
Ogeysiiska Bukaanka & Xaaladaha Caafimaadka
La soco in FCHC la xidhi doono maalmaha soo socda:
Sabtida, Janaayo 1
Nooca Daryeelka Ilmo soo rididda*
DOORO MIDKiniinka ilmo iska soo ridka - illaa 9 toddobaadIlmo iska soo rididda Nidaamka - Toos - illaa 12 UsbuucIlmo iska soo ridid ​​Hab-socod - Ilaa 15 Toddobaad ahIlmo soo ridid ​​- Ma hubo nooca weli.Qiimaynta dhiciskaMaareynta dhicinDib u eegida Xulashada
Dooro maalinta aad doorbideyso ballantaada qof ahaan*
Ballamadu waxay qaadan doontaa 1.5 - 2 saacadood maalmaha shaqada; ilaa 3 saacadood Sabtida.
Balamaha waxay qaadan doonaan 2.5 ilaa 3 saacadood.
Qiyaastii imisa toddobaad ayaa laga joogaa tan caadadaadii ugu dambeysay?*
DOORO MID:wax ka yar 13 toddobaad13 toddobaad14 -15 toddobaad
Balanku waxay qaadan doonaan 3-4 saacadood.
DOORO MIDGalabnimada Isniinta (Daawada & Nidaamka Toos Kaliya)Talaado GalabSubaxnimada Khamiista (Nidaamka Toos kaliya)Khamiista Gelinka dambe (Daawaynta & Nidaamka Hurdada Kaliya)Galab JimcoSubax Hore Subax
Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad booqan kartaa boggayaga Telehealth halkan.
Xulo maalinta aad doorbidayso ballantaada TeleHealth*
DOORO MIDIsniinta SubaxnimoGalab Isniin ahFiidkii IsniintaSubax TalaadoFiidkii TalaadadaSubax ArbacoFiidkii ArbacadaSubax Khamiis ahSubax JimceGalab JimcoSubax Sabti ahWaxaan doorbidayaa inaan kuqabto casharkeyga Bukaanka Buuggeyga shaqsi ahaaneed.
Taariikhda La Doorbiday ee Ballanta Telehealth?
Sidee ayaad maqli ina daneeyaa?*
DOORO MID:SOO NOQOSHADA BUKAANKAAYAA TIRAAMAY DHAKHTARTEYGAWAXA AY SOO QAADATAY XUBIN / QOYSRaadinta INTERNETKA GOOGLEDIB U EEGIDDA ONLINE (CAAWI, GOOGLE, FACEBOOK)NAF HOTLINE AMA TILMAAN ACNUURKA QAADASHADA DHAQAALAHA ONLINE TILMAAMAHAINEEDANA.COM TILMAAMAHAIIMAANKU WUXUU LEEYAHAYBULSHADA BULSHADA (FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM)KALE (FADLAN SOO SAAR)
Mid kale (Fadlan Cadee)
Ogeysiiska SMS / Text Text
FCHC (iyada oo loo marayo adeeggeeda qoraalka farriimaha iibiya ee aaminka ah) ayaa kula soo xiriiri kara fariin qoraal ah oo SMS ah. Qoraalka waxaa ka mid noqon kara xusuusinta ballanta iyo fariimaha kale ee la xiriira daryeelka. Lambarkaaga taleefanka waligiis looma sii deyn doono xafladaha dibadda. Ka bixida fariimaha qoraalka ah ee SMS waxaan ku jawaabi karaa JOOJI waqti kasta ama waxaan ku siin karaa ogeysiis qoraal ah FCHC.
Aqoonsiga Fariinta SMS / Text Text*
Waan garwaaqsanahay oo fahmay inaan ka FURAN karo Fariimaha qoraalka ee SMS anigoo ka jawaabaya STOP wakhti kasta ama adoo siinaya ogeysiis qoraal ah FCHC.